Home News RW Hassan Cali Kheyre oo beeshiisa ku wareejiyay Isgaarsiintii dalka
RW Hassan Cali Kheyre oo beeshiisa ku wareejiyay Isgaarsiintii dalka
Horaantii sanadkan ayaa ay ahayd markii uu Xassan Cali Kheyre si bareer ah ugu wareejiyay Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ee dhawaan la abuuray beesha uu ka soo jeedo. Isaga oo aan cidna ka tala galin sameeynta hay’adda oo horay loogu sheegay sharciga isgaarsiinta qaranka in la abuuro soono ayuu waxa uu hogaankeeda u magacaabay nin hioray lataliye ugu ahaa mid ka mida shirkadaha isgaarsiinta dalka.
Waxa uu magacabaay Cabdi Shiikh Axmed oo ah nin ay isku heeb yihiin Ra’isal Wasaaraha in mudo ahna ka tirsanaa xafiiskiisa. Cabdi Shiikh ayaa waxa keenistiisa ka danbeeyay beesha Murusade ee uu ka dhashay Ra’isal Wasaaraha. Cabdi ayaa mudo labo sano ah waxaa mushaar joogta ah siinaysay mid ka mida shirkadaha isgaarsiinta isaga oo uu u ahaa la taliye gaar ah. Sidoo kale Cabdi Shiikh waxa ay saaxiibo dhaw yihiin wasiirka istaargiista iyo Tiknaloojiyadda Cabdi Cabshuur Xassan. Labadan nin ayaa hal deegan ka wada degan magaalada Muqadishu. Sidoo kale waxaa labada nin iyo RW Kheyre ka dhaxeeya ganacsi qaasa oo la xiriira isgaarsiinta dalka.
Ra’isal Wasaare Kheyre oo aan aqoonin xishood, musuq-maasuqana ku dheeraya ayaa waxa uu qorshaynayaa in uu geeyo ilo kastaa ee dhaqaale iyo mid laga xakumi karo umadda Soomaaliyeed shaqsiyaad iyo kooxo ay isku hayb yihiin ama ay kala dhaxeeyso dano gaar ah. Magacaabista Cabdi Shiikh waxaa ay dhaawac ku tahay awood qaybsiga dowlada waxa ayna luminaysaa kalsoonida shacabka ku qabaan hay’adaha dowlada. Waxaa jira heshiisyo uu horay ula saxiixdayshirkado shisheeye oo ay u horeeysa Jubuuti Telcom oo RW Kheyre saami ku leeyahay.
Previous articleGabar Wariye Aheed ka Badbaaday Isku day dil oo lagu Qaarijin Rabay iyo Shaqsigii Weeraray oo la qabtay!!
Next articleQalbi Dhagax oo diiday in uu ku dhoofo baasaboor Itooobiyaan ah
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo Weeraray Khudbadi Maanta uu Jeediyay Madaxweyne Farmaajo